GARE ROUTIERE ANDOHATAPENAKA : Mirongatra ireo trangana fisolokiana, sarona ilay jiolahy ikoizana
Nirongatra tato ho ato ireo trangana fisolokiana miseho amin’ny endriny maro samihafa eny amin’ny toby fiantsonan’ny taksiborosy Andohatapenaka. 4 novembre 2019
Tovolahy manodidina ny 27 taona indray teto no voasambotry ny Polisy avy ao amin’ny CSP7 teny Andohatapenaka, ny alakamisy 31 oktobra 2019 lasa teo , tokony ho tamin’ny 06 ora maraina noho ny resaka fisolokiana. Fotoana fanararaotan’ny olon-dratsy hanaovana ny asa ratsiny ny fotoana fahatongavan’ny fiara taksiborosy vao maraina eny an-toerana. Maro araka izany ny entana very raha tsy mailo ny tompon’entana.
Tamin’ity tranga iray ity izao dia nilaza ho mitsena ny havany tonga vao maraina eny an-toerana ilay jiolahy ary mampiresaka ny manodidina azy izy. Mody mindrana finday mba hiantsoany io havany io kanefa teti-dratsy ny ao ambadika. Mampanantena hampiditra fahana be amin’ilay finday moa izy ka dia tsy misalasala ny tompona finday manome azy.
Somary variana tampoka ny tompon’ilay finday tamin’izay fotoana izay ary nanararaotra nitsoaka ity mpisoloky saingy tsy ela foana dia saron’ny Polisy ity farany rehefa niantso vonjy ity farany. Tratra teny aminy tokoa ilay finday rehefa natao ny fisavana azy. Vaky bantsilana tamin’izay rahateo koa fa miisa 10 ny fitoriana mahakasika azy hita tao amin’ny Kaomisarian’ny Boriborintany faha-07.